रुसद्धारा सिरियाविरुद्ध आक्रमणलाई गुन्डागर्दीको संज्ञा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको घोर उल्लंघन गरेको आरोप – Puleso
रुसद्धारा सिरियाविरुद्ध आक्रमणलाई गुन्डागर्दीको संज्ञा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको घोर उल्लंघन गरेको आरोप
रुसले सिरियामाथि अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतले गरेको क्षेप्यास्त्र हमलालाई गुन्डागर्दीको संज्ञा दिएको छ । राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा राष्ट्रसंघका लागि रुसी राजदूत भसिली नेभेन्जियाले सिरियामा मिसाइल हमला गरेर अमेरिकासहितका राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको घोर उल्लंघन गरेको आरोप लगाए ।
सुरक्षा परिषद्मा सिरियामाथि अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतले गरेको हमलाको भत्र्सना गर्न भने रसियाले समर्थन जुटाउन सकेन । गत साता भएको भनिएको सन्दिग्ध रासायनिक हमलाको जवाफमा भन्दै शनिबार राति तीन राष्ट्रले सिरियाका विभिन्न स्थानमा क्षेप्यास्त्र हमला गरेका थिए ।
सिरियाको पूर्वी गुटाको डुमामा भएको भनिएको सो रासायनिक हमलाको अन्तर्राष्ट्रिय जाँच सुरु हुनुभन्दा अघि नै क्षेप्यास्त्र हमला गरेकाले यो पूर्वयोजनाअनुसारको आक्रमण भएको नेभेन्जियाले दाबी गरे । उनले भने, ‘यसमा योजनाअनुसार भएको छ । यस मामलामा उक्साइएको छ, झूठो आरोप लगाएर हमला गरिएको छ । के तपाईं यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ ? यो अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा गुन्डागर्दी हो ।’
तर, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निकी हेलीले रासायनिक हतियारको प्रयोग रोक्न अमेरिका अर्को पटक पनि आक्रमण गर्न तयार रहेको बताइन् । उनले अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले गरेको सैन्य कारबाही अमेरिकाले बसर अल असदको सरकारलाई रासायनिक हमला गर्न नदिने स्पष्ट सन्देश भएको बताइन् । उनले शनिबार राति भएको कारबाहीबाट नष्ट गरिएको शोध केन्द्रको प्रयोग ठूलो मात्रामा हत्याका लागि हतियार बनाउन प्रयोग गरिने गरेको आरोप लगाइन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि पुनः यस्तै विषालु ग्याँसको प्रयोग गरेमा फेरि हमला गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सिरियाका राजदूत बसर जाफरीले अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सलाई झूठो आडम्बरी बताउँदै चर्को आलोचना गरेका छन् । उनले भने, ‘के मेरो देशमाथि हमला गर्न तपार्इंहरूको सरकारले यो संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जनादेश हासिल गरेको थियो ? अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतका मित्रहरू सिरियामा रासानिक हतियार बनाउने स्थानमा बम गिराएको दाबी गरिरहनुभएको छ । यदि यी तीन देशका सरकारले सही स्थान या यिनीहरूको भूमिकाका बारेमा यति सबै थाहा थियो भने उनीहरूले किन ओपीसीडब्लु (अर्गनाइजेसन फर प्रोहिबिसन अफ केमिकल वेपन्स) लाई किन जानकारी गराएनन् ? उनीहरूले यो हमलाअघि दमास्कसमा फ्याक्ट–फायरिङ मिसनलाई किन गराएनन् ? ’ पेरुसको राजधानी लिमामा रहेका अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले भने अमेरिकाले यो हमलाका लागि आफ्ना गुप्तचर प्रयोग गरेको बताएका छन् ।
आक्रमणविरुद्ध अमेरिकामा हस्ताक्षर संकलन
अमेरिकाको नेतृत्वमा सिरियामा भएको आक्रमणविरुद्ध अमेरिकामै हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइटहाउसअगाडि विरोधका लागि जम्मा भएका दर्जनौं प्रदर्शनकारीले सो आक्रमणविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन् । अमेरिकाको नेतृत्वमा फ्रान्स र बेलायतसमेतले सिरियामा शनिबार बिहानै आक्रमण सुरु गरेको २४ घण्टा पनि नबित्दै उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका थिए ।
प्रदर्शनकारीहरूले पहेंलो ब्यानरसहित ‘सिरियालाई मुक्त गर’, ‘सिरियामा अमेरिकाको युद्ध हुँदैन’, ‘सिरियामाथिको बम आक्रमणले मानवलाई फाइदा गर्दैन, यसले उनीहरूलाई मार्छ,’ जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए ।
उनीहरूले युद्धतर्फको बाटो छोडेर शान्तिको मार्ग रोज्न पनि आह्वान गरेका थिए । उनीहरूले विभिन्न सहरमा शृंखलाबद्ध रूपले प्रदर्शन गरेका छन् । सिरियाले रासायनिक अस्त्र निर्माण गर्ने गरेको भनिएका क्षेत्रमा अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले शनिबार क्षेप्यास्त्र हमला गरेका हुन् । यो हमला अहिलेका लागि पूरा भएको अमेरिकाले बताएको छ । अमेरिकाले सिरियाले पछिल्ला केही समययता रासायनिक हतियारहरूको निर्माण गरी त्यसबाट आक्रमण गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै सिरियामाथि हमला गरेको हो । यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठकमा उपस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सिरियाबारे गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरेका छन् ।
सिरियाको वर्तमान अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको भन्दै उनले यसको समाधान गम्भीर रूपमा नै सोचेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सिरियाले रासायनिक हतियारले आक्रमण गरेर नागरिक हत्या गर्नु ठूलो भूल भएको भन्दै त्यसविरुद्ध हतियारकै कारबाही विकल्प नभएको बताए ।एजेन्सी
विश्वकै लामो नङ्ग काटियो, म्युजियममा राखिने
बुधबार एउटा हातमा सबैभन्दा लामो नङ्गको लागि गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्मा नाम लेखाएका भारतको पुणे निबासी श्रीधर चिल्ललले अन्ततः विस्तृतमा...
गुफामा फसेका किशोरहरुलाई निकाल्न १८ गोताखोर पसे
बैंकक: थाइल्यान्डको थाम लुआङ्ग गुफामा १५ दिनदेखि फसेका १२ किशोर उनीहरुका प्रशिक्षकलाई निकाल्न १८ जना गोताखोरको टोली पसेको छ । आइतवार बिहान विस्तृतमा...